Chitendero Netsika: Ungavimba Nani?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Macua Malagasy Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ungavimba Nechitendero Chako Here Panyaya Dzetsika?
Sylvia uyo anoshanda mune zveutano anoti: “Kukoreji kwandaiva kwaivavo nevamwe vaizviti ndevechitendero. Asi vaibiridzira pabvunzo uye vaishandisa madhiragi asingabvumirwi nemutemo. Chitendero hachina kugona kuchinja mararamiro avo.”
Mumwe murume anonzi Lionel anoti: “Vandinoshanda navo vanonyepa kuti vari kurwara kuti vasauya kubasa asi ivo vakatogwinya zvavo. Chitendero chavo chakangofanana nemudziyo wavanochengeta mumba kuti ungoyevedza vanhu asi usingashandiswi.”
Chitendero hachisi kukwanisa kubatsira kuti vanhu vakawanda vave netsika dzakanaka. Vakawanda mazuva ano vane “mufananidzo wokuzvipira kuna Mwari, asi vachikundikana kurarama maererano nesimba rakwo.” (2 Timoti 3:5) Vatungamiriri vavo vezvitendero havasi mienzaniso yakanaka uye havana kuvapa mazano akakodzera emuMagwaro ekuti vave netsika dzakanaka. Saka hazvishamisi kuti vakawanda vavo vanodavira kuti Mwari haana basa nemararamiro avo.
Bhaibheri rinoratidza kuti Mwari anogona kurwadziwa kana kuti kufadzwa nezvatinoita. VaIsraeri vekare pavaipandukira Mwari “vaimurwadzisa.” (Pisarema 78:40) Zvisinei, kunova “nomufaro mukuru kudenga,” munhu paanosiya zvakaipa zvake nemwoyo wese. (Ruka 15:7) Kana munhu akasvika pakuziva unhu hwaBaba vedu hwakanaka, kuda kwake Mwari kunowedzera kwomuita kuti ade zvinodiwa naMwari uye kuti avenge zvaanovenga.—Amosi 5:15.
Zvapupu zvaJehovha “zvinobatsira vanhu kuva nemhuri dzinogarisana zvakanaka uye kuti vave vanhu vakanaka uye vagari vomunyika vakatendeseka,” rinodaro pepanhau rinonzi The Deseret News rokuSalt Lake City, muUtah, U.S.A. Rakawedzerawo kuti: “Vari musangano racho vanotevedzera mitemo yakasimba pamararamiro avo. Vanodavira kuti zvinhu zvakadai sokusvuta, kudhakwa, kushandisa madhiragi zvisina kukodzera, kubheja, kuita zvepabonde nevanhu vakawanda, uye ungochani, zvinoita kuti munhu asafarirwa naMwari.”
Vatungamiriri vezvitendero vari kubatsira vanhu vemachechi avo kuti vave netsika dzinodiwa naMwari here?
Kudzidza nezveunhu hwaMwari kunobatsira sei Zvapupu? “Kubiridzira kwakazara mubhizimisi rezveutano,” anodaro Sylvia ambotaurwa. “Zviri nyore kungopedzisira wava kuzviitawo. Asi kunzwisisa kuti Jehovha * anoona sei nyaya yacho kunondibatsira kuti ndiite zvakanaka. Ndinofara uye ndine rugare rwemupfungwa.” Sylvia ane chokwadi chokuti kurarama maererano nezvaanotenda kwakaita kuti ave neupenyu huri nani.
^ ndima 9 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ungavimba Nechitendero Chako Here Panyaya Dzetsika?